Creating pages in Wordpress — MYSTERY ZILLION
ကျွန်တော်တို့တွေ wordpress မှာ pages လေးတွေ ဖန်တီးတဲ့အခါမှ ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ အခြားပိုစ့်လေးတွေပါ ရှိချင်ကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ wordpress ရဲ့ မူရင်း Default page တွေက အဲဒီလို မရဘူးဗျ။
ဒါနဲ့ အဲဒီလို လုပ်ချင်လို့ မေးတဲ့လူတွေ များလာတော့ ကျွန်တော်ပြင်လို့ ရမလားဆိုပြီး စမ်းကြည့်လိုက်တာ။ အဆင်ပြေသွားတယ်။ လုပ်နည်းကတော့ ဘာမှ မခက်ပါဘူး။
Appearance ထဲက Editor ထဲ၀င်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် header.php ကို ရွှေးပါ။
အောက်က အနီရောင်နဲ့ ရေးထားတဲ့ php code လေးတွေကို လိုက်ရှာလိုက်ပါ။
[PHP]<?php wp_list_pages(вЂ™title_li=&depth=1′ ); ?>[/PHP]
[PHP]<?php wp_list_categories(вЂ™title_liвЂ™); ?>[/PHP]
ဒါဆိုရင် Categories အလိုက် pages လေးတွေ ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစစ အရာရာ အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ ခင်ဗျာвЂ¦
ဟုတ်ကဲ့အဲ ့လိုပြောပြတဲ ့အတွက်အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ။ ကျွန်တော် လုပ်ကြည့်လိုက်တာ အကိုပြောတဲ ့အတို်င်းပဲ
အစ်ကိုရေ ညီ ..သိချင်တာ တစ်ခု ရှိတယ် ဗျ
အဲတာ က တော့www.yourdomain.com/wpadmin/uploads/ ရဲ ့အောက်မှာ .swf တွေ
တင်တာ blog မှာ မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျ.. ကျွန်တော် စုစည်းထားတဲ့ဂိမ်းလေးတွေကို ဘလော ့မှာ ေ၀မျှ ခြင်
လို ့ပါ.. .swf တွေ ဘယ်မှာများ တင်လို ့ရမလဲ ခင်ဗျ..ဘယ်မှ မရ ရင်တော့page google ဘဲ
သုံးရတော ့မှာဘဲ.. Host က freehost ပါ.. byethost.com က ရယူထားပါတယ် WP ပါ:D
<embed src="http://linlinaung.mdy.googlepages.com/ArrowShooting.swf" width="400" height="350" type="application/x-shockwave-flash"></embed>
အဲလို လေး သုံးတာပါ.. ကူညီနော်.. page google က တင်တာ များနေလို ့ပါ..
တင်တာ blog မှာ မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျ..
တင်ပြီးသွားရင် အကိုက ဘယ်လို ပြန်ဖမ်းလဲ....
ပြန်ဖမ်းတယ် အစ်ကိုရ.. pages google မှာ တင်တဲ ့လင် ့ဆို အဆင်ပြေတယ်
yourdomain.com/wpadmin/uploads/ အောက်မှာ တင်လိုက်ရင် အဆင်မပြေတော ့တာဗျ
သေချာလဲ တင်တယ်.. ဘာလို ့လဲ တော့မသိဘူးး.. :O
Plz test this.
i'm also host from freehost!
တရားခံ တွေ ့ဘီ.. ကွန် ကွန်.. ကွန်ကြောင် ့မို ့လို ့နေမယ်..
iblogger ကို အခု ဘန်းကျော်က ဘန်းထားတယ်လေ.. အနော် က ကျော်ခွ ပြီး ပို ့တင်တာကိုး..:D
ကိုဂျီး.. ရဲမာန် ရေ..ဒီမှာဘဲ မေးလိုက်တော ့မယ် ဗျ
SMF က expired ဖြစ်ရင် ဘာတွေ ဖြစ်တတ်လဲ ခင်ဗျ... အဲဒါလေး သိချင်လို ့ပါ
လက်ရှိ ကျွန်တော ့ဖိုရမ် က expired ဆိုတဲ ့စာ ပြ နေလို ့ပါ ခင်ဗျာ..
ကိုဂျီး.. ရဲမာန် ရေ..ဒီမှာဘဲ မေးလိုက်တော ့မယ် ဗျ :d
ကျွန်တော smf ကို သိပ်မသုံးဖြစ်ဘူး အကိုရ....
ဘာမှတော့ မဖြစ်လောက်ပါဘူး။ expaired ဆိုတဲ့ ဘဘောက ဘားရှင်း အသစ်ထွက်လာလို့ ပေါ်တဲ့စာမျိုး ဖြစ်မှာပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အချိန်ရတဲ့နေ့ upgrade လုပ်ပေးလိုက်ပါလား။ Backup လေးတော့ လုပ်ထားပေါ့..